ကြိုးမဲ့နားကြပ်များကို Gearbest တွင်ရောင်းချခြင်း Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | အခြားကိရိယာများ
ကြိုးမဲ့နားကြပ်တစ်ခုရဖို့စဉ်းစားနေတုန်းလား။ အကယ်၍ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏ပုံစံကိုသင်မခံရပ်နိုင်လျှင်၊ ဒီအကြီးအခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ Gearbest ၏လက်မှအရောင်းမြှင့်တင်ရေးနားကြပ်များထွက်လာသည်။ သင့်အားမကြာမီသင့်အားလွှတ်ပေးရန်အကြောင်းပြချက်မရှိတော့ပါ။
ကွဲပြားခြားနားသောကြိုးမဲ့နားကြပ်အမျိုးအစားများကိုစျေးကွက်၏ကျူးကျော်မှုကြောင့်မည်သူမျှသတိမပြုမိကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောပုံသဏ္,ာန်များ၊ အရွယ်အစားများနှင့်အရောင်များကိုဤကြီးမားသောကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဖြင့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုတည်းကိုပင်ရွေးချယ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဆိုတော့ ဒီနေ့နင့်ကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့နည်းလမ်းလေးခုနဲ့ကူညီနိုင်ပြီ.
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲတချို့အရောင်တွေကတခြားမော်ဒယ်တွေနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူတို့တောင်မှတည်ရှိနေတယ် နားကြပ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနားထဲမှာရှိတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်။ ထိုကြိုက်တတ်တဲ့သူရှိပါတယ် ရိုးရာနားကြပ် ဒါကနားထဲကိုသာထည့်တယ်၊ AirPods ရိုက်ပါ။ ပြီးတော့ရွေးချယ်သူတွေရှိတယ် အတွင်းပိုင်းနားထဲ၌ရှိသောအရာသည်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံကိုအတူတကွကိုက်ညီစေသောအရာများဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်အရောင်များကိုမြည်းစမ်းကြည့်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပုံစံနှစ်မျိုးလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။
ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် Alfawise V5။ နားကြပ်တချို့ ဒီဇိုင်းအတွက်သမ္မာသတိရှိကြလော့ပေမယ့်ကောင်းမွန်စွာချော။ နားကြပ်၏အားသွင်းအခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်ပွင့်လင်းသောအဖုံးပါသည့်အားသွင်း box တစ်ခုဖြင့်။ မျှော်လင့်ပါတယ် ဘလူးတုသ် 5th, ပိုမို အသုံးပြုမှု6နာရီ ဆက်လက်နှင့်သာ6ဂရမ်တစ် ဦး ချင်းစီအလေးချိန်။ သူ့ ဘက်ထရီမှာ 60 mAh ဖြစ်သည်တစ်ယူနစ်။ ပြီးနောက် အားသွင်းအခြေစိုက်စခန်း 500 mAh အထိကမ်းလှမ်း ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တိုးမြှင့်ဖို့။ ဒါတွေကိုကြိုက်လား
နောက်ထပ်နားကြပ်ပုံစံဖြင့် Bluetooth နားကြပ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် QCY T1။ အ tamañopequeño နှင့်၎င်း၏အားသွင်းအမှု၌ပင်သတိပညာရှိ။ အဲဒါရှိတယ် ၁၀ နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် နှင့်အတူတစ် box ထဲမှာအသုံးပြုမှု၏ 380 mAh ဘက်ထရီ ၂ နာရီအတွင်းမှာအားပြည့်ပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာပြင်ထိပါ ပြန်ဖွင့်ထိန်းချုပ်မှုသည်။ နှင့်အသစ်အဆန်းအဖြစ်ကရှိပါတယ် IPX4 ရေခုခံ.
ရှောင်ရှားရန်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည် Apple လွှမ်းမိုးမှု စျေးကွက်ထဲမှာ။ စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရန်အကောင်းဆုံးအရောင်းရဆုံးထုတ်ကုန်များမှုတ်သွင်းထားသောပုံစံတစ်ခုကိုဖန်တီးသောထုတ်လုပ်သူများရှိသည်။ ဒီနားကြပ်တွေလိုပဲ နှင့် ဒဏ္legာရီ AirPods တူညီကြည့်ရှုပါနားကြပ်နှင့်သေတ္တာနှစ်မျိုးစလုံးသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေအရေးကြီးသောဟန်းဒီးကပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ AirPods ၏ဤကိုယ်ပွား, ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ဘလူးတုသ် 5th, အထိ3နာရီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၎င်း၏အမှု၌ဘက်ထရီအားသွင်း 320 mAh ဘက်ထရီ နှင့်လက်မှတ် IPX5.
ဒီမှာကုမ္ပဏီရဲ့နောက်ပုံစံတစ်ခုကိုတင်ပြထားပါတယ် QCY, အ T2C။ အချို့နားကြပ်များသည်ယခင်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသော်လည်းအချို့သောပိုမိုကောင်းမွန်သောကဏ္sectionsများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောကဏ္sectionsများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဖြစ်ခြင်းအပြင် ပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်, ၎င်း၏ပြီးဆုံးနှင့် charger ကို box ကိုသူများအတန်ငယ်ပိုပြီး "ပရီမီယံ" ဖြစ်ကြသည်။ အခြားလူတိုင်းလိုပဲ၊ True Wiereless အသံဆက်သွယ်မှုနှင့် Bluetooth 5.0။ သူတို့ကတက်ကိုဆက်ကပ် အသုံးပြုမှု4နာရီဒါပေမယ့် အခြေစိုက်စခန်းအားသွင်း 800 mAh 8 အပြည့်အဝစွဲချက်အာမခံပါသည်။ ငါတို့ရနိုင်သည် အသုံးပြုမှု 32 နာရီ သူတို့ကိုထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီ ဤရွေးချယ်စရာမဆိုနှင့်အတူ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ မရပါ။ Gearbest သည်နောက်ဆုံးပေါ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ပြီးတော့ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိုမိုနီးကပ်စေသည် မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းအများဆုံးတောင်းဆိုထားသော gadget ကိုရယူပါ။ သင်၏စမတ်ဖုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာကိုယခုရယူပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » အခြားကိရိယာများ » ကြိုးမဲ့နားကြပ်များကို Gearbest တွင်ရောင်းချပါ
နောက်ဆုံးသူများ (QCY-T2C) တွင်သင် ၀ ယ်ရန်လင့်ခ်မထည့်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
ဟဲလို Paco !! ဒါဟာအနည်းငယ်ချုံးခဲ့သည်။ ခင်ဗျားမှာအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုလည်းရှိတယ်။ အမှားအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။